Njeri Rionge, ongowesifazane owaletha i-inthanethi kwabampofu - i-Afrikhepri Fondation
Njeri Rionge, owesifazane owaletha i-intanethi kubampofu
Sekuvele ku-2011, umagazini waseMelika waseForbes, ochwepheshe bezindaba eziphumelelayo, wanikeza umlando kulo wesifazane ongavamile, "osomabhizinisi ophumelele kakhulu e-Afrika".
Indaba ye Njeri Rionge iqala ngasekupheleni kweminyaka ye-2000 lapho enquma ukuqala i-Wananchi.com, umhlinzeki wenkonzo ye-intanethi. I-revolution eKenya, izwe lapho abaholi bezombangazwe ngokwabo behluleka ukujwayela ithuluzi le-digital.
"Kuye, ukufinyelela kalula kolwazi nge-Intanethi kwakuyindlela yokuvala igebe elikhona phakathi kwezikhulu ezifundile zaseMpumalanga Afrika kanye nabanye abantu", Namuhla, yena Le nkampani manje ingumhlinzeki we-inthanethi omkhulu kunayo yonke i-East Africa futhi ibhalwe ku- $ 173 million.
Eminyakeni ye-46, lona wesifazane osomabhizinisi akakaze abe nomsebenzi olinganiselwe futhi oqoshwe ngempumelelo. Ngaphambi kokungena kuma-telecom, wayesebenza njengezinwele noma abathengisi esitolo sokugqoka eLondon.
Njengoba usuka ku-Wananchi.com, u-Njeri Rionge akayekanga. Eminyakeni engaphezu kwe-10, wakhetha inkampani yokubonisana nokuphatha, Ignite, enye ebuchwepheshe obusha, i-Insight. Futhi lezi yizibonelo nje zochungechunge olude.
Esikhulumweni esasixoxela uForbes uyachaza:
"Ngidala amabhizinisi amakhulu ngoba ngiyaqiniseka ukuthi i-Afrika iyona mkhawulo wezomnotho olandelayo futhi sidinga ukwakha izinhlangano zendawo ezizosekela ukukhula."
Iprojekthi ethandwa kakhulu kuye okwamanje? I-lounge yebhizinisi. I-incubator yokusiza osomabhizinisi abanoveli baqalise, bakhule futhi bathuthukise imibono yabo.
Njeri Rionge uhlose ukuvumela abanye balandele isibonelo sakhe futhi babe ngumthombo wokukhuthazwa.
Ngokuqondene nezwe lakhe, izwe lobuchwepheshe obusha, manje ubhekana nezinkinga eziningana ekutholeni abasebenzi abafanelekayo kuloluhlobo lomsebenzi.
"Inselelo enkulu kakhulu ezabasebenzi," kuchaza yena.
Inselele entsha yalomabhizinisi ozelweyo.
Ukunqoba Inzondo - UZirignon Grobli
Buka i-Selma (2014)